अन्तत : डा.सुरेन्द्रको योगेश लाई कडा प्रश्न र गर्जन – ज्ञानेन्द्र शाहि ठिक तर. (भिडियो सहित) - Enepalese.com
अन्तत : डा.सुरेन्द्रको योगेश लाई कडा प्रश्न र गर्जन – ज्ञानेन्द्र शाहि ठिक तर. (भिडियो सहित)
इनेप्लिज २०७६ भदौ ३० गते २२:०७ मा प्रकाशित
प्राध्यापक डा सुरेन्द्र केसीले मन्त्री योगेस भट्टराई र ज्ञानेन्द्र बहादुर साही बिच उत्पन्न घट्ना बारे मुख खोलेका छन । मन्त्री ले प्लेन एकघण्टा सम्म अबरोध हुने परिस्थिति बनाएको भन्ने बुद्द एयरलाइन्स ,यो कुरा को मुख्य दोसि भएको बताएका छन । ज्ञानेन्द्र साही माथी पुलिस लगाएर सुर्खेतमा जे गरे काठमाडौ मा पार्टीका बिद्यार्थिलगाएर त्यही कुरा दोहोर्‍याउनु ले राज्यको चरित्रमाथी नै आसङ्का उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन । समयको संबेदनसिलतालाई र राजकिय पदको गरिमालाई बुझ्न सक्दैन भने नागरिकले प्रस्न उठाउनु स्वभाबिक भएको भए पनि त्यही प्रस्नको रिसमा ज्ञानेन्द्र साहीलाई दुर्व्यवहार ,कुटपिट वा कुनै पनि पुर्वाग्रह राखेर अभिब्यक्त भएको यो परिस्थिति हेर्दा सरकार लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति बिरुद्ध अग्रसर भएको टिप्पणी गरेका छन ।